အင်တာနက်ဆောင်းပါး | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label အင်တာနက်ဆောင်းပါး. Show all posts
အွန်လိုင်းရှော့ပင် များ၏ သုံးစွဲသူပေါ် သက်ရောက်မှု
ဈေးဝယ် ထွက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ လူမျိုးစုတွေ၏ အစဖြစ်သော ကုန်ပစ္စည်း လဲလှယ်ခြင်းမှ စတင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်မှ လူအများစုသည်လဲ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းကို မွေ့လျော်ပါသည်။
စိတ်ပညာလေ့လာမှု အရလဲ ဈေးဝယ်ခြင်းသည် အများစု၏ စိတ်ဖိစီးမှု များကို လျှော့ချနိုင်သည့် ပျော်ရွှင် ဖွယ်ရာ တခုဖြစ်သည်ဟုလဲ တွေ့ရှိရသည်။ ထိုကြောင့် စာရေးဆရာများ ကပင် ဈေးဝယ် ထွက်ခြင်းကို ၀တ္ထုများရေးခြင်းနှင့် “Confession ofaShopaholic” အစရှိသည့် ရုပ်ရှင်များဖန်တီးခြင်း တို့ကိုပြု လုပ်ခြင်းဖြင့်လဲ တင်စားလေ့ရှိကြသည်။
၀ယ်ယူသူတွေကို ၀ယ်ချင်အောင် မည်သည့်အရာက ပြုလုပ်ပါသလဲ၊ ၀ယ်သူစိတ်ကို မည်ကဲ့သို့သော အရာများက ဆွဲဆောင်နေပါသလဲ ။
ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းဆိုသည်မှာ လဲ အနုပညာတခုလိုပါပဲ။ စားသုံးသူ၏ အမူအကျင့် ဆိုသည့် ဘာသာရပ်ကိုလဲ လေ့လာမှုများသင်ယူမှုများရှိလာသည်နှင့်အတူ ဈေးဝယ်ခြင်းသည်လဲ အမြင်သစ်ဖြင့် အွန်လိုင်းတွင်ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း သို့ အဆင့်တဆင့်တိုးတက်လာလျက်ရှိသည်။
မိုဘိုင်းဖုန်းများ ရေပန်းစားလာသည်နှင့်အမျှ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းကိုလဲ မိုဘိုင်းဖုန်းများဖြင့် အွန်လိုင်းမှ ၀ယ်ယူလျက်ရှိကြသည်။ မပြောင်းလဲဘဲ ကျန်ရှိနေသည်ကတော့ ရောင်းချသူများအနေနှင့် ၀ယ်ယူသူများ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို မည်သည့် အရာဖြင့် ဆွဲဆောင်လွှမ်းမိုးမလဲ ဆိုတာကို လေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ ၀ယ်ယူသူများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် လိုချင်တပ်မက်မှုများကို လေ့လာ စမ်းစစ်မှုများဖြင့် မည်သည့်ရောင်းချ မှုမျိုးက အကောင်းဆုံးဖြစ်မည် ဆိုသည်ကို ရှာဖွေ စမ်းစစ်လေ့ရှိကြသည်။
ပထမဆုံးအချက်ဖြစ်သည့် ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်၏ သက်ရောက်မှုများသည် ၀ယ်ယူသူ၏ အွန်လိုင်းမှဈေးဝယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သတ်သော စိတ်နေသဘောထား၊ အွန်လိုင်းမှဈေးဝယ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ ယင်းတို့၏ ဆုံးဖြတ်မှုများနှင့် အွန်လိုင်းမှဝယ်ယူခြင်းများ ခေတ်စားလာခြင်းအစရှိသည်တို့မှ လွှမ်းမိုးထားသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
သို့သော်ငြားလည်း ကုန်ပစ္စည်း/၀န်ဆောင်မှု နှင့်ရောင်းချသူ၏ အရည်အချင်းသည် ၀ယ်ယူသူများ၏ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်သုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ ၀ယ်ယူသူများမှ သုံးစွဲရလွယ်ကူသည်ဟုယူဆခြင်း စသည်တို့မှ ၀ယ်ယူသူများ၏ စိတ်ကျေနပ်မှု နှင့် ယင်း၏ ထပ်မံဝယ်ယူလိုစိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြစ်သည်။
မိမိနိုင်ငံတွင်မရနိုင်သောပစ္စည်းတခုကို အွန်လိုင်းမှ ၀ယ်ယူခြင်းသည် ၀ယ်ယူသူတဦးတယောက်၏ ကုန်ပစ္စည်း/၀န်ဆောင်မှုအပေါ် ကြိုက်နှစ်သက်မှုနှင့် အမူအကျင့်များ၊ ပြင်ပဆိုင်များသို့ ဈေးဝယ်ထွက် ရခြင်းကို ကြိုက်နှစ်သက်မှုမရှိသော ထိုလူ၏ အကျင့်စရိုက်စသည်တို့များစွာပါဝင်ပေသည်။
ပစ္စည်းတခုနှင့်တခု ယှဉ်ကြည့်ရသည်မှာလဲ အွန်လိုင်းတွင် လွန်စွာလွယ်ကူလှသည့် အလျောက် ၀ယ်ယူသူတဦးတယောက်ခြင်းစီ ၏ ပို၍အဆင်ပြေသည်ဟု ယူဆမှုနှင့် အွန်လိုင်းမှ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းကို ပိုမိုထိရောက်မှုရှိသည်ဟု ထင်မြင်ခြင်း စသည့် အမူအကျင့်များ က များစွာ ပါဝင်ပတ်သတ်မှုရှိနေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အွန်လိုင်းဈေးကွက်များဖြစ်သည့် myanmarblogshop နှင့် omyanmar ၊ Kaymu နှင့် yangonbay များတွင် ၀ယ်ယူသူများစိတ်ဝင်တစားဝယ်ယူခြင်းသည် ယင်းတို့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရောင်း ချလျက်ရှိသော ကုန်ပစ္စည်း၏ အရည်အသွေး၊ ပို့ဆောင်မှုကြာမြင့်ချိန်၊ ကုန်ပစ္စည်း လဲလှယ်ပေးမှု ၊ ငွေပေးချေမှု၊ ရောင်းချသူအားယုံကြည်စိတ်ချရမှုအစရှိသော အချက်များ အစရှိသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။
Original link - https://plus.google.com/109931221441884438607
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, November 16, 2015 No comments:
FACEBOOK ကို လုံခြုံစွာနဲ့ ရှင်းလင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်မယ့် နည်းလမ်း အချို့
Facebook မှာ Group များစွာ ရှိပြီး သင်ဟာ အဖွဲ့ဝင် ဒါမှမဟုတ် Admin အနေနဲ့ ပါဝင် ပတ်သက် နေမှာပါ။ သင်က အဖွဲ့ထဲ ကိုယ်တိုင် ၀င်ရောက်တာ မဟုတ်ဘဲ သူငယ်ချင်းများက အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ထည့်သွင်း ထားတာ တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေရင် မလိုလားအပ်တဲ့ Notification များစွာကို သင်ရရှိနေမှာပါ။ အဲဒီအတွက် သင်ပါဝင်နေတဲ့ အဖွဲ့အားလုံးကို တစ်နေရာတည်းကနေ မြင်တွေ့နိုင်ဖို့နဲ့ နှုတ်ထွက်ချင်တဲ့ အဖွဲ့ထဲကနေ ထွက်ခွာဖို့အတွက် Group Notification နဲ့ Settings များကို ပြုပြင်ရမှာပါ။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ Home Page ရဲ့ ဘယ်ဘက်မှ Group ရဲ့ ညာဘက်ဘေးမှ More ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ Browse Groups Page ကိုရောက်သွားမှာ ဖြစ်ပြီး Suggested, Friends , Local, Invites နဲ့ သင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေတဲ့ Your Groups ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍငါးခုနဲ့ ပြသပေးထားပါတယ်။ Your Groups မှ အဖွဲ့များရဲ့ ညာဘက်ဘေးမှ Add to Favorites ကို နှိပ်ပြီး Favorites ထဲထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ Settings Icon ကိုနှိပ်ပြီး Edit Notification Settings ထဲမှာ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက် Post တင်ရင် အချက်ပြပေးဖို့၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် Post တင်ရင် အချက်ပြပေးဖို့နဲ့ အချက်ပြမှုကို ပိတ်ထားဖို့ စတာတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ နှုတ်ထွက်ဖို့အတွက် Leave Group ကိုနှိပ်ပါ။
သင့်ကို အခြားသူများ စကားလာပြောတာကို မနှစ်သက်ရင် သင့် Chat Box မှ Online Status ကို သူငယ်ချင်း အနည်းငယ်ကိုသာ မြင်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ညာဘက်အောက်ထောင့်မှ Settings Icon ကိုနှိပ်ပြီး Advanced Settings ထဲသွားပါ။ Turn on chat only some friends ကိုရွေးချယ်ပြီး သင့်ရဲ့ Online Status ကို မြင်စေချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
အချို့ Facebook အသုံးပြုသူများက သူတို့ရဲ့ အလုပ်ကိစ္စအတွက် Fan Page မထောင်ထားဘဲ Personal Account ကိုသာ အသုံးပြုကြပြီး အခြား သူများကို Tag လုပ်ခြင်းဖြင့် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေကြပါတယ်။ သူတို့ Tag လုပ်တဲ့ ပို့စ်တိုင်းဟာ သင့်ရဲ့ Timeline မှာ ပြသပေးမှာပါ။ အဲဒီသူကို Unfriend ပြုလုပ်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် Tag ပြုလုပ်တာကို လုပ်ခြင်းဖြင့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယ တစ်ခုကို ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် Settings ထဲက Timeline and Tagging ကို သွားပါ။ posts friends tag you in before they apper on your timeline? မှာ On လုပ်ပေးရင် သင့် သူငယ်ချင်းများက သင့်ကို Tag လုပ်ထားတဲ့ ပို့စ်များကို သင့်ရဲ့ Timeline မှာ မပြသပေးခင်မှာ သင်က လုပ်နိုင်မှာပါ။ အဲဒီကနေ သင့်ကို Tag လုပ်ထားတဲ့ ပို့စ်များထဲကနေ သင့် Timeline မှာ ဖော်ပြစေချင်တဲ့ ပို့စ်များကို ရွေးချယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဏ္ဍ Facebook, အင်တာနက်ဆောင်းပါး
‘‘အာ့လာပြောတာ’’၊ ‘‘ဆေးထိုးကြမ်းတယ်’’တို့နှင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ဗန်းစကား ရေစီးကြောင်း
လူကြီး လူငယ် အများစု၏ နေ့စဉ် ဘဝတွင် လွှမ်းမိုးလာသည့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် (ဓာတ်ပုံ − ဂျေမောင်မောင်(အမရပူရ))
ရုတ်တရက် နားထောင် ကြည့်ပါက မသိ သူများ အဖို့ အူလည်လည် ဖြစ်သွား နိုင်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသား အများစု အသုံးပြု လာကြသော လူမှု ကွန်ရက် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ပေါ်မှာတော့ အဆိုပါ စကားလုံး များက အဆန်း မဟုတ်ဘဲ ဆိုလို ရင်းကို ဒက်ခနဲ နားလည် ကြစမြဲ။ ‘‘ဆေးထိုးတယ်’’ ဟူသည့် စကားလုံးက လူမှု ကွန်ရက်ပေါ်မှာ ဆေးပညာ ဆိုင်ရာ အသုံးအနှုန်း မဟုတ်ပါ။ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး အပျော် သဘောနှင့် ချောက်ချခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ် ရပါသည်။
တစ်ဦးဦးရေးသား ထားသည့် စာသားများ အောက်တွင် တစ်စုံ တစ်ဦး တင်ထားသည့် ဓာတ်ပုံ အောက်တွင် မှတ်ချက် တစ်ခုခုကို ရေးသား၍ ခပ်တည် တည် ချောက်တွန်း သွားခြင်း၊ အတို့ အထောင် လုပ်သွားခြင်းကို ‘‘၀င်ပြီး ဆေးထိုး သွားတယ်’’ဟု သုံးစွဲ လာကြသည်။ ထို့အတူ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ပေါ်တွင် မိမိ ခံစားချက် များကို ပေါက်ကွဲ၍ ရေးသားမိ သည်ဖြစ်စေ၊ တစ်စုံတစ်ဦးနှင့် အပြန် အလှန် ရန်တွေ့ ကြသည်ဖြစ်စေ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းကို ‘‘၀ုန်းပြီ... ဖေ့စ် ဘွတ်ခ်ပေါ် တက်ဝုန်း သွားတယ်’’ဟု သုံးကြသည်။
အပြင်လောက ဗန်းစကားဖြစ်သော လူ တစ်ဦး ဦးကို လူအုပ်စု လိုက်က ၀ိုင်းဝန်း ရိုက်နှက်ခြင်းကဲ့သို့ အပြု အမူဖြစ်သည့် ‘‘ဆွမ်းကြီးလောင်းတယ်’’ဟူသည့် စကားလုံးနှင့် လည်း အဓိပ္ပာယ် ဆင်တူပါသည်။
‘‘ပြောကြည့်လေ ရင်ထဲပေ့ါ သွားတာပေ့ါ...’’၊ ‘‘ဆုတောင်းလေ.. ဆုတောင်း’’ စသည်ဖြင့် လူငယ်ပိုင်းများ၏ မိမိတို့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများနှင့် ပြောဆို ကြသည့် ဗန်းစကား တချို့က လူမှု ကွန်ရက်ပေါ် ရောက်ရှိ လာသလို .. လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှ မြစ်ဖျားခံလာသည့် ဗန်းစကား အချို့ကလည်း အပြင်လူမှု ဘ၀ထဲသို့ ကူးစက် လာသည်။
ခေတ်စနစ်အရ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဗန်းစကားလုံးတို့က အရပ်စကား၊ အရပ်နားဖြင့် ပျံ့နှံ့တတ်လေ့ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုမူ တိုးတက်မြန်ဆန်လာသည့် အိုင်တီခေတ်စနစ်ကြောင့် ဗန်းစကားအသစ် အသစ်များပေါ်ထွက်လာသလို လူတကာနှုတ်ဖျား ရေပန်းစားရန်လည်း လွယ်ကူလာသည်။ လူငယ်အများစု အသုံးပြုနေသည့် လူမှုကွန်ရက်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သည် ဗန်းစကားသစ်များ ပျံ့နှံ့သုံးစွဲမှု အားကောင်းရာနေရာ တစ်ခုဖြစ် လာပါသည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှ ဗန်းစကားဝေါဟာရ များသည် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်မှ နာမည်ကျော် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အနုပညာရှင်များ၏ စကားပြောမှားမှု၊ လူရယ် စရာ ကောင်း လောက် အောင် ပြောဆို မိမှု တို့မှလည်း စတင်ပေါက်ဖွား လာတတ်ပြီး လူတစ်ဦးချင်း စီက တီထွင် သုံးစွဲလိုက်သည့် စကားလုံးကို သဘော တကျ ယူသုံးရာမှ တစ်ဆင့်လည်း တွင်ကျယ် သွားလေ့ရှိသည်။ ၀န်ကြီးတချို့ ပြောဆိုဖူးသည့် ‘‘ပါးရိုက်မယ်’’၊ ‘‘ထမင်း တစ်နပ်လျှော့စား’’စသည့် စကားလုံး တို့ကလည်း ဗန်းစကား အဖြစ် ရေပန်းစား ခဲ့ဖူးသည်။
မကြာသေးမီက ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကျောင်းသား သပိတ် ကိစ္စ ဆန္ဒပြ သူများကို ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးသည့် လက်ပတ်နီဝတ် လူများနှင့် လက်ပံတန်း အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းမှုဖြစ်ရပ် တို့ကလည်း ဗန်းစကား တစ်ရပ်ဖြစ် လာခဲ့သည်။ လက်ပတ်နီ ၀တ်ထားသူများ လမ်းလယ်တွင် ရပ်၍ ဘုကြည့်ကြည့်နေသည့် ဓာတ်ပုံ၊ ရဲတပ် ဖွဲ့ဝင်အချို့၏ ဓာတ်ပုံနှင့်အတူ ‘‘ကြည့်နေတယ် .. မရိုက်သေးဘူး’’၊ ‘‘ကြည့်နေတယ် မဖမ်းသေးဘူး’’စသည့် စကားလုံးများဖြင့် အချင်း ချင်းနောက်ပြောင် စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သုံးစွဲသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေက ၎င်း၏အကောင့်တွင် စာရေးသားရာ၌ သုံးစွဲလေ့ရှိသော ... ဗျာတို့ရေ ဟူသည့် စကားလုံး ကလည်း ဦးလှဆွေ အသုံးအနှုန်း အဖြစ် နာမည်ကျော်လျက် ယူငင်သုံးစွဲ သူများ ရှိခဲ့သည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် မြန်မာလို သုံးစွဲကြသူ အများစုမှာ ဗန်းစကား သစ်ဝေါဟာရ များကို တီထွင်ကြသည် သာမက အာမေဍိတ် သံများကိုလည်း မပီမသလေသံ အတိုင်း စာသား အဖြစ်ပြောင်းလဲကာ သုံးစွဲကြလေ့ ရှိသည်။
ခစ်ခစ်... ဟူသည့် ရယ်သံကို ခ်ခ်... ခိခိ... ခလိ ခလိဟု လည်းကောင်း၊ ဟိဟိ... အစား ငိငိ.. ဟုလည်းကောင်း၊ ဟေ့ရောင် (ဟေ့ကောင်) ဟူသည့် စကားလုံး အစား... ဟျောင့်.. ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ဘယ်လိုပြော ရမလဲ အစား... ဘိုပြောရမဲ... ဟုလည်းကောင်း၊ Block ပစ်လိုက်မယ် အစား... ဘော့ပလိုက်မယ်... ဟုလည်းကောင်း၊ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်အစား... ကွကိုယ်...ဟုလည်းကောင်း လေသံ အမြန်ပြော ပါက မပီကလာဖြစ် သွားသည့် အသံအတိုင်းစာသားကို သုံးစွဲတတ်ကြသည်။
ကျေးဇူးတင်တယ်ဟု ပြောရမည့် အစား အတိုကောက်အနေနှင့် ကျေးကျေး၊ Unfriend လုပ်လိုက် တယ်ဟု ပြောမည့် အစား အန်လိုက်တယ်၊ နန့်ကြော ထနေသည် အစား မွစိထ၊ အေးပါကွာဟု ပြောမည့် အစား အင်္ဂလိပ် စာလုံး အတိုကောက် အနေဖြင့် APK ၊ မိမိ အကောင့်တွင် တင်ထားသည့် စာများ၊ ဓာတ်ပုံ များကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု တန်းစီ၍ Like ၀င်လုပ် သွားသူကို Like ဗုံးကြဲသွားတယ်.. စသည်ဖြင့် ထွင်တတ် ကြသေးသည်။
ဗန်းစကား တစ်ခုခု ရေပန်းစား လာပါက မသုံးစွဲ လိုက်ရ မရှိ ရလေအောင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် သုံးစွဲ သူများက လိုက်လံ သုံးစွဲတတ်လေ့ ရှိပြီး အသစ်အသစ် ပေါ် လာနေသည့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ဗန်းစကားသစ် များကြား မျက်စိလည် ရသည်များလည်း ရှိသည်။
တွင်ကျယ်စွာ ရေပန်းစား လာသည့် စကားလုံး များကို လူငယ်များ သာမက လူလတ်ပိုင်းများနှင့် အသက် အရွယ်ကြီးရင့် သူအချို့ပါ သုံးတတ်၊ ရေးတတ် ကြသည် ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
ယခုနောက် ပိုင်းတွင် လူမှုကွန်ရက် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်၌ Myanmar Memes ၊ BUMi (Burmese Uncensored Memesi) ၊ BUM အစရှိသည့် Group များကို တည်ထောင် ထားကြပြီး လူငယ် များစွာ စွဲလမ်းနှစ်ခြိုက်စွာ ၀င်ရောက် သုံးစွဲလျက် ရှိကြသည်။ အဆိုပါ စာမျက်နှာ များမှ ဗန်းစကား အသစ်များ ပေါ်ထွက် လာလေ့ရှိပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် တစ်ခွင် တွင်ကျယ်စွာ ပျံ့နှံ့သွား တတ်သည်။
ထို Group များတွင် သုံးစွဲသူမန်ဘာများက ဓာတ်ပုံပေါ်တွင် စာသား များရေးကာ ဖန်တီးဖော်ပြ ကြခြင်းဖြစ်ပြီး များသော အားဖြင့် ဗန်းစကား များကို ထည့် သွင်းလေ့ ရှိကြသည်။ နာမည်ကျော်တို့ ဓာတ်ပုံများအပြင် ဇာတ်ဝင်ခန်း ပုံရိပ် ဓာတ်ပုံတချို့ကို အသုံးပြု၍ လက်ရှိရေပန်း စားနေသည့် ဗန်းစကားနှင့် တွဲစပ် ကာ ဟာသမြောက်စွာ ဖန်တီးမှုများ ရှိလာသည့် အတွက် လူငယ်တို့ အသုံးများ လာကြသည်။
‘‘လွယ်တော့ မလွယ်ဘူး... ရိုးသား ရတာပေ့ါ..... ဆိုရင် မင်းဘာပြောမလဲ’’ ‘‘မေးလည်းမေးချင်တယ် မေးလည်း မမေးရဲဘူး’’စသည့် စကားစု များသည် အဆိုပါ Group များတွင် သာမက ပြင်ပဖေ့စ်ဘွတ်ခ် သုံးစွဲသူ များထံ ကူးစက် လာပြီး မိမိပြော လိုသည့် အကြောင်း အရာကို ရေးသား ပြီးနောက် အောက်ဆုံး စာကြောင်းကို အထက်ပါ စကားစုများဖြင့် အဆုံး သတ်လေ့ ရှိသည် အထိ တွင်ကျယ် ခဲ့သည်။
‘‘တို့.. ဘာတို့ ဆိုတဲ့စကားလုံး ခေတ်စားတုန်း ကဆို တော်တော် များများ လိုက်သုံး ကြတယ်။ ကိုယ်ပြောချင် တာရဲ့နောက်မှာ အဲဒီ ဗန်းစကားတွေကို ကပ်ထည့် သုံးကြ တာပေါ့။ ဥပမာ... ဘုရားကိုရောက်နေတယ်.. တို့ .. ဘာတို့... အဲဒီလိုပေါ့’’ဟု ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် သုံးစွဲသူ တစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။
အချို့ကလည်း မိမိ စတင် သုံးစွဲ လိုက်မိသည့် စကားလုံးလေး တစ်ခုကို သဘောကျ၍ အခြား သူများက ယူသုံးရာမှ တစ်ဆင့် Friends များသည့် အကောင့် များဆီသို့ ရောက် ရှိကာ ထိုအကောင့်များမှ တစ်ဆင့် ထပ်မံပျံ့နှံ့သွားလေ့ ရှိသည်။ ‘‘အာ့..လာပြောတာ’’ ဟူသည့် ဗန်းစကား တစ်ရပ် ဆိုလျှင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် တွင် ပျံ့နှံ့သုံးစွဲမှု များခဲ့ရာမှ တေးရေး ဆရာသျှန်ထွန်း (မြန်မာစာ) က အဆိုပါခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့် ပတ်သက်သော သီချင်း တစ်ပုဒ်ရေး သားပြီး အဆိုတော် တစ်ဦးက သီဆိုလိုက်သည် အထိ ပြင်ပသို့ တိုင်ပေါက်ရောက် ခဲ့သည်။
By - ဥက္ကာကိုကို
ခရီး သွားလာခြင်း အတွက် Facebook ကို အသုံးပြု နည်းများ
အားလပ် ရက်မှာ ခရီး သွားလာ ကြမယ့် သူတွေ အတွက် Facebook က ကူညီ ပေးနိုင် ပါတယ်။ စိတ်ဝင် စားစရာ အကောင်းဆုံး နေရာ များကို ရှာဖွေဖို့၊ ခရီးသွား ၀န်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ များကို ဆက်သွယ်ဖို့ အပြင် အခြား အထောက် အကူ ပြုတဲ့ စွမ်းဆောင် ချက်များကို Facebook က ပံ့ပိုးပေး ထားပါတယ်။
ခရီး သွားလာခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Pages များကို Like ပြုလုပ် ထားပါ။
စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းတဲ့ နေရာ ဒေသ များကို သိရှိဖို့ အတွက် ခရီးသွား ၀န်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ များရဲ့ Pages များကို Like ပြုလုပ် ထားသင့် ပါတယ်။ အဲဒီ Page များမှ ပို့စ် တိုင်းကို လက်မလွတ် စေဖို့ Interest List ထဲ ထည့်ထား နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီ Page တွေကို နောက် ပိုင်းမှာ အလွယ် တကူ ပြန်ရှာ ကြည့်နိုင်ဖို့ သိမ်းထား နိုင်တဲ့ Save Feature ကို လည်း Facebook က ထည့်သွင်း ပေးထားပါပြီ။ Page ရဲ့ ညာဘက်မှ အလျား လိုက် အစက် သုံးစက်ကို နှိပ်ပြီး Save လုပ် ထားနိုင်ပြီး သိမ်းထား တာတွေကို ပြန်ကြည့် ချင်ရင် Facebook Home Page ရဲ့ ဘယ်ဘက် Sidebar မှ Saved ကိုနှိပ်ပါ။
ခရီး သွားလာခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Groups များကို Join ပါ။
Facebook မှာ Groups သန်းပေါင်း များစွာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ Groups များစွာ ထဲမှာ ခရီး သွားလာခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Groups များလည်း ရှိပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အသက် အရွယ်နဲ့ တူညီတဲ့ ခရီးသွား ၀ါသနာ တူသူ တွေရဲ့ Group ကို Join လုပ်သင့် ပါတယ်။
Facebook ရဲ့ ဘယ်ဘက် Sidebar မှ Events ကို နှိပ်ရင် Events များကို ပြသ ပေးထား တဲ့ Page ကို ပြသ ပေးမှာပါ။ အဲဒီမှာ သင့်ကို ဖိတ်ကြား ထားတဲ့ Events များသာ မက သင့်ရဲ့ ဒေသ အတွင်းမှ Event များ၊ သင် Like ပြုလုပ် ထားတဲ့ Page များက ပြုလုပ် ထားတဲ့ Events များ၊ သင် အဖွဲ့ဝင် ထားတဲ့ Group များမှ Events များ အားလုံး ကို ပြသပေး ထားမှာပါ။ Events များကို ရှာဖွေ နိုင်တဲ့ အခြား နည်း တစ်ခုက Search Box ဖြစ်ပါတယ်။ Search Box မှာ Events in Taunggyi လို့ ရိုက်ရှာ လိုက်ရင် တောင်ကြီးမှာ ကျင်းပမယ့် Events များကို ပြသ ပေးမှာပါ။
Facebook Graph Search က အလွန် အစွမ်း ထက်ပါတယ်။ Graph Search ကနေ သွားမယ့် ဒေသမှာ ရှိတဲ့ ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ကော်ဖီဆိုင် စတာ တွေကို ရှာဖွေ နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် Hotels in Chaung Thar လို့ ရိုက်ထည့် လိုက်တာနဲ့ ချောင်းသာမှာ ရှိတဲ့ ဟိုတယ် များကို ပြသ ပေးမှာပါ။ ရလဒ် တွေရဲ့ ညာဘက် ဘေးမှာ အသေးစိတ် အချက် အလက် များကို စိစစ်ပြီး ရှာဖွေ နိုင်တဲ့ Search Tools များ ရှိပါတယ်။
သူငယ်ချင်း များက သူတို့ ခရီးသွား ခဲ့ကြတဲ့ နေရာ ဒေသနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသုံး ၀င်တဲ့ ပို့စ် များကို တင်ထား ရင် အဲဒီ ပို့စ်များကို သိမ်းထား နိုင်ပါတယ်။ ထို့ အတူပဲ ခရီး သွားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Pages များမှ ပို့စ် များကိုလည်း သိမ်းထား နိုင်ပါတယ်။ ပို့စ်ရဲ့ ညာဘက် အပေါ်ထောင့်မှ မျှားကို နှိပ်ပြီး Save ကိုနှိပ်ပါ။
သိမ်းထားတဲ့ ပို့စ် များကို ပြန်လည် ကြည့်ရှုဖို့ အတွက် Home Page ရဲ့ ဘယ်ဘက် Sidebar မှ Saved ကိုနှိပ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် သင့်ရဲ့ Activity မှာလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သင် ခရီးသွားမယ့် အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပို့စ် တစ်ခု တင်ပြီး သူငယ်ချင်း များကို မေးမြန်းပါ။ ဥပမာ အားဖြင့် “ ချောင်းသာ သွား မလို့ပါ။ စိတ်ဝင်စား စရာကောင်းတဲ့ နေရာတွေ ရှိရင် ပြောပြပါ သူငယ်ချင်းတို့ “ ဆိုပြီး ပို့်စ်တင်ပါ။ သူငယ်ချင်း များရဲ့ အဖြေကို ရရှိဖို့ အချိန် အနည်းငယ် စောင့်ရမှာပါ။ ခရီးသွားမယ့် ဒေသနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်း အချက် အလက်များ ရှိတဲ့ ၀က်ဆိုက် များကိုလည်း သူငယ်ချင်း များကို မေးလို့ ရပါတယ်။
Facebook မှာ Apps များစွာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ Apps များစွာထဲမှာ Travel App များစွာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ App များကို အသုံးပြုပြီး ဟိုတယ်များ၊ နေရာဒေသများ ၊ အဝေးပြေး ကားများကို စုံစမ်း သိရှိနိုင် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Travel App အတော် များများမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်း အချက် အလက် များကို ထည့်သွင်း ထားခြင်း မရှိသေး တာတွေ့ ရပြီး နိုင်ငံခြား ခရီးသွားဖို့ အတွက်တော့ သတင်း အချက် အလက်များ ရယူနိုင် ပါတယ်။
Facebook ဟာ ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး လူမှု ကွန်ယက်တွေ ထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အတွက် လိုချင်တဲ့ သတင်း အချက် အလက် များစွာကို ရယူနိုင်တဲ့ နေရာ လည်း ဖြစ် ပါတယ်။ Facebook ကို သတင်း ဖတ်ဖို့ ၊ ပို့စ်တင်ဖို့၊ Brand များကို ကြော်ညာဖို့ ၊ အလုပ် အကိုင် ရှာဖွေဖို့ အပြင် ခရီးသွားခြင်း အတွက် လည်း အသုံးပြုနိုင် တယ်ဆိုတာ တင်ပြ လိုက်ပါတယ်။
by: Thu Ya
မြန်မာပြည်တွင် အင်တာနက် အသုံးပြုမှု များလာခြင်းနှင့် လူတို့ရဲ့ အသုံးပြုပုံ အလေ့ အထ
မြန်မာပြည်မှာ လက်ရှိတွင် အင်တာနက် အသုံးပြုသူ အရေ အတွက် ဟာ ၇ သန်း ကျော်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း
live data များက ဖော်ပြ ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ် Active user များ အနေနဲ့ ခွဲကြည့်မယ် ဆိုရင်
၅ သန်း လောက်ပဲ ရှိမှာပါ။ အဓိက ကတော့ သူက IP Address တစ်ခုကို လူ တစ်ယောက် နှုန်းနဲ့ တွက်
ထား တာကြောင့်ပါ။ တကယ်တမ်း ကျတော့ လူ တစ်ယောက်ဟာ IP Adress တစ်ခုစီ ပါဝင်တဲ့ ကွန်ပြူ
တာ ဆက်စပ် ပစ္စည်းပေါင်း အနည်းဆုံး ၂ ခုလောက် ရှိနေတဲ့ ခေတ်မို့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
စမတ်ဖုန်း လည်း နှစ်လုံးတွေ ရှိလာကြသလို၊ လပ်တော့လည်း ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ကျနော် တစ်ယောက် တည်းမှာတောင် ငါးခု ရှိပါတယ်။ အိမ်မှာ ကွန်ပြူတာ နှစ်လုံး၊ အမြဲ သုံး ဖုန်းနှစ်လုံးနဲ့ ရုံးမှာ သုံးရန် ကွန်ြပူတာ က ၁ လုံးဆိုပြီးတော့ ရှိပါ တယ်။ ယင်း အချက် အလက်ကို Kaymu မှ အွန်လိုင်း မားကတ် တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးမှ မျှဝေပေး ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော ၂ နှစ်အတွင်း အင်တာနက် အသုံးပြုသူ အရှိန်နဲ့ တိုးတက်လာတယ်ဆိုတာကတော့
ငြင်းမရပါဘူး။ အဓိကအားဖြင့် Ooredoo နဲ့ Telenor တို့လို ကုမ္ဗဏီက ဈေးသက်သာ ဆက်သွယ်ရေး ဖုန်းနံပါတ်များ ရောင်းချခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ပါ ပါဝင်ပြီးသား ဖြစ်ပြီး MPT, MEC တို့ပါ
အပြိုင် ရောင်းချမှု ကြောင့် ၂ နှစ်အတွင်း တိုးတက်မှု က လေးဆလောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ အင်တာနက် တိုးတက်မှုဟာ ဘာနဲ့တူသလဲဆို တိုးတက်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့လောကထဲကို ခါးဆက်ကနေ ဝင်လာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အသင့်ရှိပြီးသား နည်းပညာနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုရန် အကြောင်းဖန် လာပြီး ဒါတွေနဲ့ နှီးနှောနိုင်မှု နည်းနေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လွယ်တကူ သုံးလို့ရတဲ့ Facebook တို့လို ဝဘ်ဆိုဒ်က လူသုံးအများဆုံး ဖြစ်လာပြီး အရေအတွက်ပေါင်း ၄ သန်းလောက်က ယင်း အပေါ်မှာ အချိန်တွေ ကုန်နေကြပါတယ်။
နည်းပညာ တိုးတက်မှုဟာ ဒေသတွင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာ နဲ့ အချက်အလက်များ တိုးတက်မှုလည်း လိုအပ် ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ နိုင်ငံတကာက ဝဘ်ဆိုဒ်များ၊ နည်းပညာများ၊ အကြောင်းအရာများ၊ သတင်းအချက်အလက် များကို ပိုဆို စားသုံးနေရပြီး ဒါဟာ ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကကတော့ Knowledge gap ကွာခြားမှုဖြစ်ပြီး Internet ကို Good အတွက် သုံးရန် မဟုတ်ပဲ Bad အတွက် သုံးရန် ဘက်ကို ပိုလို့ အားသန်စေခဲ့ ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ အမြဲပြောဖြစ်တာက လူတွေကို အင်တာနက် သုံးရန် wikipedia လို ဆိုဒ်မျိုးတွေ ကြည့်ပါ။ နိုင်ငံခြား သတင်းဆိုဒ်တွေ ဖတ်ပါ။ ဒါ့အတူ ပြည်တွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ ဆိုဒ်များကိုလည်း ဖတ်ပါ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အွန်လိုင်းပေါ်ကနေပါ ပညာတွေ သင်ကြားတတ်အောင်လည်း တိုက်တွန်းရပါ သေးတယ။်
ဒါ့အပြင် အင်တာနက် ကို ဖျော်ဖြေရေးနဲ့ ပညာရေးအတွက် သုံးရုံတင် မကပဲ စီးပွားရေးအတွက်ပါ အသုံးပြု လာနိုင်စေဖို့ အတွက် စာရေးသူတို့မှ ပိုလို လိုလား ပါတယ်။ ဒါမှလည်း နိုင်ငံတကာကို ယှဉ်နိုင်မှာမို့ ဖြစ် ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက pay per click ဝဘ်ဆိုဒ်များ ဝင်ရောက်လာပြီး ဒါတွေကို တကယ်လည်း အကျိုးရှိရှိ အသုံးမချနိုင်ပဲ အလိမ်ခံနေရတဲ့ လူငယ်များ လည်း ရှိပါတယ်။ အဓိကကတော့ အွန်လိုင်း ငွေးပေးစနစ် မ
လွယ် ကူသေး တာကြောင့်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျနော့အနေနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ငွေရှာချင်
သူများကို အကြံပေးချင်တာကတော့ အွန်လိုင်း ဈေးဆိုင်လေးတွေ စမ်းသပ် ဖွင့်စေဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Facebook ပေါ်မှာ ရောင်းနေရုံတင် မကပဲ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေပေါ်မှာပါ ရောင်းတတ်စေအောင် သင်ပေးပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် အွန်လိုင်း ဈေးရောင်းဈေးဝယ် ဝဘ်ဆိုဒ်တို့မှာ အကောင့်ဖွင့်လို့ စမ်းသပ် ရောင်းချ ခိုင်းစေ တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ငွေဝင်စေမယ့် နည်းဖြစ်တာကြောင့်ပါ။
အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ လေ့လာစရာရှိတာ လေ့လာပြီး Offline life မှာ ပြန်လည် အသုံးချတာမျိုးကိုလည်း အားပေးသလို၊ အွန်လိုင်းမှာ ဘလောဂ်များ ဖန်တီးရေးသားခြင်း ကလည်း ကောင်း တဲ့ အလေ့အကျင့် တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူကလည်း မိမိအတွက် အခွင့်အလမ်း များကို တိုးစေ ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လူငယ်များ အနေနဲ့ အင်တာနက် အကျိုးရှိရှိ အသုံးချတတ်လာမယ်လို့ မျော်လင့်ပါတယ်။
From : Internet for Myanmar by Aung Khamkyaw
ဘောလုံး ၀ါသနာရှင်များ အတွက် လိဂ်ပေါင်း များစွာမှ ပွဲများကို မလွတ်တမ်း ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် Youtube လင့်
ဘောလုံး ၀ါသနာ ရှင်များ အတွက် လိဂ် ပေါင်းများစွာမှ အပတ်စဉ် ဘောလုံး ပွဲများကို မလွတ် တမ်း
ကြည့်ရှု နိုင်မယ့် Internet Connection လုံးဝမကျ ပဲ အဆင်ပြေပြေ ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ Youtube လင့်ကို
ကျနော်လည်း အရင်တုန်းက ဘောလုံးပွဲကို ကြည့်ချင်ရင် တိုင်ပတ်နေတာ ဘယ်ကနေ ကြည့်ရမယ်
မသိ ဂိုးလ်စကိုးလေး ကိုသာကြည့်ပြီး ကျေနပ် ခဲ့ရတယ်။
ထိုင်းမှာတော့ အများကြည့်နေကြတဲ့ www.hahasport.com ကနေကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အရင်နှစ်တွေက အဆင်ပြေ ပေမယ့် အခုတော့ အဆင် မပြေတော့ပါ၊ လိုင်းက သိပ်
မကောင်ဘူး ဆိုရင်တော့ အ၀ိုင်းလေး လည်နေတာ ကိုပဲ ကြည့်နေ ရတယ်။
အထူး သဖြင့် ကြည့်နေ ရင်းနဲ့ ရပ်သွား တယ်ဆိုရင်ပဲ ဓာတ်ပုံကို ထိုင်ကြည့်နေ ရသလိုမျိုး ဖြစ်နေ
တယ် ဘောလုံးပွဲသာ ပြီးသွားတယ် အစအဆုံး ဘယ်လို ဖြစ် သွားမှန်းကို မသိတာ၊ အရင် တုန်း
ကတော့ လိုင်းမကောင်းလို့ ကြည့် မရတာပဲ ဖြစ်မယ်လို့ ဘယ်ဟုတ်မလဲ တစ်ပတ်ဆိုလည်း ကြည့်
မရ နောက် တစ်ပတ် ဆိုလည်း ဒီလိုပါပဲ ဆိုတော့ အဲဒီလင့်က အဆင်မပြေတော့မှန်း သိသာလာ
တယ် မကြည့်ပဲလည်း မနေနိုင်ကြပြန် ဘော်ဒါတွေ ၀ိုင်းရှာကြရင်း ကနေ အခု ကျနော် တင်ပေး
မယ့် www.warpfootball.com ကို သွားတွေ့တယ်။
ဟုတ်ပါတယ် အခုကျ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်တဲ့ www.warpfootball.com လင့်ဟာ လိဂ်ပေါင်း များ
စွာမှ အပတ်စဉ် ဘောလုံးပွဲများကို မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်မယ့်Youtube လင့်ကို တစ် နှစ် သုံး ဆို
ပြီး တင်ပေးထားတာမို့ ဘယ်ဖုန်းအမျိုအစား၊ Tablet မျိုးမဆို Android Device & IOS Device
အားလုံးမှာ Internet connection လုံးဝမကျ ပဲ ဇိမ်ကျကျကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူ တာနဲ့ ကြည့်ရှုကြမယ့် ဘော်ဒါတွေကတော့ www.warpfootball.com ကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်
ပါ ပွင့်လာတဲ့ ပရိုဂရမ်တစ်ခုမှာ နာမည်ကြီးလိဂ်တွေဖြစ်တဲ့ ပရီမီးယား၊ စပိန်လာလီဂါ၊ အီတလီ၊ ဂျာ
မန်၊ ပြင်သစ်၊ ဟော်လန် တွေရဲ့ Logo လေးတွေနဲ့ ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။
အပေါ်မှာ မြင်နေရတဲ့ အတိုင်းပါ မိမိကြည့်ရှု လိုတဲ့ လိဂ်ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(ထိုင်း စာလုံးတွေ ချည်းမြင်နေ ရခြင်းသည် ကျနော်က အခု ဒီပိုစ့်ကို ထိုင်းမှ ရှာပြီး တင်ပေးနေ တာမို့
စာလုံးတွေက ထိုင်းလိုချည်း ပေါ်နေတာဖြစ်သည်။
နိုင်ငံအလိုက် ကွဲပြား ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါသည်၊ ပြသနာ မဟုတ်ပါ။ ဖတ်မရ ရင်နေ အဓိက ဘော
လုံးပွဲ ကြည့်လို့ ရဖို့က အဓိကဖြစ်လို့ ကျော်သွား လိုက်ပါ)
အောက်ကို ဆင်းသွားလိုက်ပါ အဲဒီမှာ လိဂ်ပေါင်းစုံမှ လာနေဆဲ ပွဲစဉ်တွေနဲ့ လာ ဦးမယ့် ပွဲစဉ်တွေကို
အစော ဦးဆုံး လာမယ့် ပွဲစဉ်သည် အောက်ဆုံး နားကို ရောက်နေ ပါလိမ်မယ် နောက်မှ လာမယ့်ပွဲ
စဉ်မျာသည် အပေါ်ကိုရောက်နေ ပါလိမ့်မယ်။
အောက်ကပုံကို ကြည့်လိုက်ပါ အခုလာနေတဲ့ ပွဲစဉ်
အာဆင်နယ် နဲ့ စပါး
တစ်ချက်နှိပ် လိုက်ပါ။ နောက်ထပ် ပရိဂရမ်တစ်ခု ထပ်ပွင့် လာပါလိမ့်မယ်။
အပေါ်မှာ မြင်နေရတဲ့ ပုံအတိုင်း ပါပဲ အခုလာနေတဲ့ အာဆင်နယ် နဲ့ စပါး ပွဲစဉ်ပါ ကျနော် အနီ
ရောင်လေးနဲ့ ၀ိုင်းပြထားတဲ့ Youtube ဆိုတာတဲ့ နေရာမှာ ဘောလုံးပွဲကို ကြည့်ရှု နိုင်မယ့်
Youtube လင့် တွေထဲက တစ်ခုခုကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
အောက်ကပုံအတိုင်း Youtube လင့်နဲ့ ပေါ်လာလိမ့်မယ် ။
အပေါ်မှာ မြင်နေရတဲ့ အတိုင်းပါပဲ Internet connection လုံးဝ မကျပဲ လိုင်း အသင့် အတင့် ရှိနေ
ရုံနဲ့ Android device & IOS Device အားလုံးမှာ Youtube လင့်ကနေ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
ပိုစ့်ကို ရေးနေရင်းနဲ အာဆင်နယ် နဲ့ စပါး က လာနေတာမို့ နည်းနည်း နောက်ကျ သွားတာပါ။
Evenrton & Liverpool (12.00)
Atletico & Real Madrid (9.00)
Juventus & AC Milan Sun morning
စတဲ့ ပွဲကောင်းတွေကို လက်မလွတ်တမ်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
ဘောလုံးပွဲတိုင်းကို ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် Youtube လင့် www.warpfootball.com
ဖုန်းမှ ကြည့်လိုသော ဘော်ဒါတွေလည်း မိမိဖုန်းရဲ့ Google Search မှာ အပေါ်မှာ လင့်ကို ရိုက်ရှာပြီး
ကျနော် ပုံလေးနဲ့ ပြပေးထားတဲ့ အတိုင်း တစ်ဆင့်ခြင်း သွားလိုက်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
မြင်တဲ့ အတိုင်းပါပဲ အခု လာနေတဲ့ အာဆင်နယ် နဲ့ စပါး ပွဲကို တိုက်ရိုက် ကြည့်ရှု နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, February 08, 2015 1 comment:
ကဏ္ဍ လမ်းညွှန်, အင်တာနက်ဆောင်းပါး
Social Media တွေကို အသုံးပြု သူတွေဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်း မြင့်မားနေ ပါတယ်။ စမတ်ဖုန်ုး အသုံးပြု
သူတွေ များပြားလာတာနဲ့ အမျှ Facebook အသုံးပြုသူ အရေအတွက်ဟာလည်း ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ
Social Media တွေက လူတွေအပေါ် နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ဖမ်းစား စွဲဆောင်နေကြပါတယ်။ အဲဒီအတွက်
Facebook ကို အသုံးပြု သူတွေ ထဲမှာ အလွန် အကျွံ စွဲလမ်းပြီး အသုံးပြုနေ သူတွေ လည်း များပြား
လာပါပြီ။ တစ်ချို့ဆို အလုပ်ပျက် အကိုင်ပျက် ဖြစ်တဲ့ အထိအောင် စွဲလမ်းစွာ အသုံးပြုနေကြပါတယ်။
သူတို့ကိုယ် သူတို့လည်း မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အဲဒီလို လူတွေအတွက် Facebook ကို အချိန်နဲ့
ကန့်သတ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ထိန်းကျောင်းပေးနိုင်တဲ့ Tools တွေကို တီထွင်လာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
LeechBlock က Firefox ဘရောက်စာ အတွက် Addon ဖြစ် ပါတယ်။ LeechBlock ကို အင်စတော
လုပ်ပြီးရင် အသုံးပြုမှုကို ခဏတာပိတ်ထားချင်တဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေကို သတ်မှတ်ဖို့ကဏ္ဍ ခြောက်ခုကို
ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ တစ်ပတ်မှာ Facebook အသုံးပြုမှုကို ပိတ်ထားချင်တဲ့ နေ့ရက်တွေကို သတ်
မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အချိန် အပိုင်းအခြားတစ်ခု သတ်မှတ်ပြီး ပိတ်ထားလို့လည်း ရပါတယ်။ သတ်မှတ်
ထားတဲ့ နေ့ရက်တွေကို Repeat လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီကို Customize လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် လူမှုကွန်ရက်တွေကို နေ့ဘက်မှာ ပိတ်ထားပြီး
အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေကို ညဘက်မှာ ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Porn Site တွေကို
အမြဲတမ်း ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ Firefox အသုံးပြုသူတွေအတွက် LeechBlock က တန်ဖိုးရှိတဲ့ အ
StayFocusd ကလည်း LeechBlock လို စွမ်းဆောင်နိုင်ပေမယ့် Chrome အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ သင်
အလွန်စွဲလမ်းပြီး အလုပ်ပျက် ၊ အကိုင်ပျက် ဖြစ်လောက်အောင် ကြည့်ရှုလေ့ရှိတဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေ
ကို ခဏတာ ပိတ်ပင်ထားချင်ရင် StayFocusd က သင့်အတွက်ပါ။
သဘောတရားချင်းကတော့ အတူတူပါပဲ။ ခဏတာ ပိတ်ထားချင်တဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေကို နေ့ရက်၊ အ
ချိန် အပိုင်းအခြားများနဲ့ ပိတ်ပင်ထားနိုင်ပါတယ်။ LeechBlock နဲ့ မတူတာက StayFocusd မှာ ၀က်
ဆိုက်များ သတ်မှတ်ဖို့ ကဏ္ဍတစ်ခုပဲ ပါရှိတာပါ။
“Max Time Allowed” Setting ပါရှိပြီး ပိတ်ထားတဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေကို ခဏတာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ အားဖြင့် Facebook အသုံးပြုမှုကို ပိတ်ထားပေမယ့် “ Max Time Allowed” Setting မှာ မိနစ်
သုံးဆယ် သတ်မှတ် ထားရင် Facebook ကို ပိတ်ထားတဲ့ နေ့ရက်၊ အချိန် အပိုင်း အခြား အတွင်းမှာ
တောင် မိနစ် သုံးဆယ်ကြာ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
ColdTurkey က Desktop Program ဖြစ်တဲ့ အတွက် Browser Level ထက်ပိုပြီး Computer Level
အထိပါ ပိတ်ပင်မှုတွေ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင် ဘယ် ဘရောက်စာကို သုံးသုံး ColdTurkey က
၀က်ဆိုက်တွေကို ပိတ်ပေး ထားနိုင် ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Steam လို Video Game Program တွေကို
လည်း ပိတ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ ၀က်ဆိုက်တွေသာမက Program တွေကိုပါ ပိတ်ပေးထားနိုင်တာ
ပါ။ ColdTurkey ကို Task Manager, System Tray တို့ကနေ ပိတ်လို့ မရသလို Uninstall လုပ်ဖို့
လည်း သင့်ခွင့်ပြုချက် ရရှိမှ လုပ်နိုင်မှာပါ။
xMinutesAt က Facebook နဲ့ အခြား ၀က်ဆိုက်များ အသုံးပြုချိန်ကို သတိပေးနိုင်တဲ့ Web Tool တစ်
ခု ဖြစ်ပါတယ်။ xMinutesAt ၀က်ဆိုက်ကိုသွားပြီး Facebook လိပ်စာကို ထည့်ပေးပြီး အချိန် သတ်
မှတ်ပေးပါ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်ပြည့်သွားရင် သင့်ကို သတိပေးပါလိမ့်မယ်။
xMinutesAt က Bookmarklet ပြုလုပ်ပေးထားပြီး သင့် ဘရောက်စာရဲ့ Bookmark Bar ပေါ်တင်
ထားနိုင်ပါတယ်။ Bookmarklet ကိုနှိပ်ရင် လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ ၀က်ဆိုက်အတွက် အချိန် အကန့်
အသတ်ကို လျှင်မြန်စွာ သတ်မှတ်နိုင်မှာပါ။
Google Play Store အ​ကြောင်း
Google play store သည် Multimedia content များကို ရောင်းချသည့် Google ၏ online store ဖြစ်သည်။ ဤ
store မှ နေ၍ သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်၊ ဗီဒီယို၊ ဂိမ်း၊ စာအုပ်နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲများကို အခပေး၍ ဝယ်ယူနိုင်သည်။ သို့သော် အခ
မဲ့ရ သည်တို့ လည်း ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် Google play store သို့ ဝင်ရန် Google play store application ရှိရန်
လိုသည်။ ထို application ကို မိမိ၏ tablet သို့မဟုတ် phone ပေါ်တွင် Install လုပ်ထား ရန်လည်း လိုပါသည်။
Google play store ၏ အစသည် Google Market ဖြစ်သည်။ ယခင်က ဝယ်ယူထားသော Android tablet များ
eSင့် Smart phone များပေါ်တွင် Android market application အဟောင်း ရှိကောင်းရှိနေနိုင်ပါသည်။ Google
သည် 2008 ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် Android market ကို ကြေညာလျက် online digital store လော
သို့ရာတွင် Phone နှင့် Tablet သုံးစွဲသူများ စတင် အသုံးပြုနိုင်သည်မှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်နေ့
တွင်မှ ဖြစ်ပါသည်။ အခပေး ဆော့ဖ်ဝဲ ရောင်းချခြင်း ကိုမူ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင်မှ စတင်နိုင်ခဲ့
ပါသည်။ ထိုစဉ်က ဆောဖ့်ဝဲရေးသူ အများစုမှာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနှင့် ဂရိတ် ဗြိတိန်မှ ဖြစ်သည်။ သို့သော်
၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှစ၍ အခြားသောနိုင်ငံ ၂၉ နိုင်ငံမှ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူများ အတွက် လမ်းဖွင့်
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလထဲသို့ ရောက်သည့်အခါ Google သည် Android market ၌ content filtering စနစ်ကို
ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ထို့ပြင် Android market မှ ဝယ်ယူသော Application များကို မကြိုက်လျှင် ၂၄ -၄၈ နာရီ
အတွင်း ငွေပြန်းအမ်း ယူနိုင်သော စနစ်အစား ၁၅ မိနစ်အတွင်း ငွေပြန်အမ်းယူနိုင်သည့် စနစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပါ
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလသို့ ရောက်သည့် အခါတွင်မူ Android market သည် smart phone နှင့် tablet ပေါ်မှ
သာ ဝင်ရောက်နိုင်သော အရာ မဟုတ်တော့။ Web client ကိုသုံးပြီး PC မှ ဝင်ရောက်နိုင်သော နေရာလည်း ဖြစ်
လာပါသည်။ Android market webpage ထဲဝင်၍ request လုပ်သော Application များ (အခပေးနှင့် အခမဲ့)
တို့ကို download ဆွဲချခွင့် ပြုပါသည်။ သို့သော် Android market ၌ မှတ်ပုံတင် ထားသော device တစ်ခုအား
အထောက် အထားကို တောင်းပါမည်။ Download ဆွဲထားသော application တို့ကို ယင်း device တွင်း၌သာ
၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လသို့ ရောက်သည့် အခါ Android market သည် အဆင့် ထပ်၍ မြင့်လာပြန်သည်။ Android
market တွင် Add-in application တစ်ခု ထပ်ထည့်ပြီး ယင်းမှနေ၍ ငွေလက်ခံကာ Application ရောင်းချသော
အဆင့်သို့ တက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မေလကား Android market ပုံစံပြောင်းသော ကာလဟု ဆို
နိုင်ပါသည်။ New application list ကို သီးခြားဖော်ပြသည်။ အရောင်းရဆုံး application၊ အရောင်းရဆုံး ဆော့ဖ်
ဝဲရေးဆွဲသူတို့ကို သာမက အယ်ဒီတာ စိတ်ကြိုက် application တို့ကို သီးခြားစာရင်းများဖြင့် ဖော်ပြလာပါသည်။
ရည်ရွယ်ချက်မှာ Smart phone နှင့် Tablet သုံးစွဲသူတို့အား application များနိုင်သမျှ များအောင် ပြသရန်ဟု
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအရောက်တွင်မူ Google သည် Android market တစ်ခုလုံး၏ interface ကို ပြန်လည်
ပြင်ဆင်ရေးဆွဲသည်။ အပြင်အဆင်သစ်တွင် content feature ကို ပိုမိုအလေးပေးလာသည့်ပြင် screen filter
များကိုလည်း ပိုမိုထည့်သွင်းလာပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဈေးကွက်အတွင်း အွန်လိုင်း စာအုပ်ရောင်း
ချမှုနှင့် ရုပ်ရှင်ငှားရမ်းမှုကို ဖြည့်စွက် ထည့်သွင်းလာပါသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ တွင် Android market ထဲ၌ music store တစ်ခု အသစ် တိုးလာသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်
မတ်လတွင် Apk application ဖိုင်တစ်ခုအား အမြင့်ဆုံး ခွင့်ပြုအရွယ်အစား 50mb မှအထက်သို့ မြှင့်တင်ပေးခဲ့
သည်။ ထုိ့ကြောင့် 50Mb ရှိသော Apk ဖိုင်အပြင် အပိုဆောင်းဖိုင်နှစ်ခုကို တစ်ခုလျှင် 2Gb နှုန်းဖြင့် ထပ်မံဖြည့်
စွက်ခွင့် ပေးခဲ့ ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၆ ရက်နေ့ အရောက် တွင်မူ Android market ကို Google play
store အဖြစ်သို့ အမည်ပြောင်းလဲ ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ မေလတွင် Google play store တွင် ငွေပေးချေ ရာ၌
application သုံးပြီး ပေးချေစေသော စနစ်ကို စတင် ကျင့်သုံး ခဲ့ပါသည်။
Google play application သည် open source မဟုတ်ပါ။ Google ကသတ်မှတ်ထားသော Compatibility
လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော Android device များတွင်သာ ယင်းကို install လုပ်ခွင့်ပြုပါသည်။ ယင်း appli
cation ကို သုံး၍သာ Google play store သို့ အခမဲ့ ဝင်ရောက်ခြင်း application များ ရယူခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်
ပါသည်။ ထို့ပြင် google နှင့် လိုင်စင်ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် ပြုလုပ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါသည်။ အစောပိုင်း
တွင် Apple ၏ iPod touch နှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စေရန် Google play နှင့် ချိတ်ဆက်သည့် Android device သည်
3G သို့မဟုတ် 4G ချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းရှိရမည်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့သော်လည်း Samsung မှ Galaxy player ထွက်
လာချိန်တွင် ယင်းသတ်မှတ်ချက်ကို လျှော့ပေါ့ ပေးခဲ့ပါသည်။
Google play store ၏ အဓိကလုပ်ငန်းမှာ Tablet နှင့် smart phone သုံး Application များရောင်းချရန် ဖြစ်ပါ
သည်။ သို့သော် Google play သည် application install လုပ်မပေးပါ။ Android device တွင်ပါသော Pack-
age Manager Service ကိုသာ install လုပ်ပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။ Apk ဖိုင်တစ်ခုအား device အတွင်း
သို့ download ဆွဲချပြီးသည့်အခါ Pack Manager ကို တွေ့မြင်ရပါမည်။ Application များကို များသောအား
ဖြင့် ဖုန်း၏ Internal storage ထဲတွင် Install လုပ်သော်လည်း အချို့သော အခြေအနေများတွင် external
storage card ထဲတွင် install လုပ်ပေးပါသည်။
ယနေ့အချိန်တွင် Google play store သည် အဓိကအားဖြင့် Application များကို ရောင်းချပေးနေပါသည်။
Google play မတိုင်မီ Android market အမည်ဖြင့် စတင်ချိန်က ၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ်လ ရောက်ချိန်အထိ
application စုစုပေါင်း ၂၃၀၀ သာရှိပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လကုန်ဆုံးချိန်တွင် application နှင့် ဂိမ်းပေါင်း
ငါးသိန်းအထိရှိနေပြီး download ဆွဲချမှု ၂၀ ဘီလျံ ရှိနေပါသည်။ Google play application ကို အသုံးပြု
ပြီး Google နှင့် ချိတ်ဆက်မှတ်ပုံတင်ထားသော device မှန်သမျှသည် (အီရန်နိုင်ငံမှလွဲ၍) Google play
store မှ အခမဲ့ application နှင့် game များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ အခပေး Application များကိုမူ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ
ပေါင်း ၁၂၉ နိုင်ငံတွင်သာ တိုက်ရိုက် ရောင်းချနိုင်ပါသေးသည်။
Install လုပ်ပြီးသား application များကို အလိုအလျောက် update လုပ်လိုလျှင်လည်း user က ကြိုတင်ရွေး
ချယ် သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါသည်။ Google play သည် user device နှင့် ကိုက်ညီသော application ကိုသာ
download ချနိုင်သည့် filter ထည့်ပေးထားသဖြင့် မိမိစက်နှင့် မကိုက်ညီသော application ကို install မလုပ်
မိစေရန် အကူအညီ ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် မကောင်းသည့် အချက်မှာ ဖုန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု
ပေးသူတို့အား tethering application များကို တားမြစ်ခွင့်ပြုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ထဲတွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ပေါင်း ၃၁ နိုင်ငံမှ ဆော့ဖ်ဝဲ ရေးသူ များသည် Google play store သို့
အခပေး application များ တင်ပို့ရောင်းချနိုင်ကြပါပြီ။ သို့ရာတွင် မှတ်ပုံတင်ကြေး ၂၅ ဒေါ်လာပေးရန် လိုအပ်
ပါသည်။ Application တစ်ခု၏ ရောင်းချ တန်ဖိုးမှ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူက ရရှိပြီး ကျန် ၃၀ ရာခိုင်
နှုန်းကို ဖုန်းဝန်ဆောင်မှု ပေးသူနှင့် ငွေကြေး စီမံခန့်ခွဲပေးသူများက ရရှိပါသည်။
Google က အကျိုးမြတ် ရာခိုင်နှုန်းခံစားခြင်းမရှိပါ။ ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူများသည် Google checkout merchant
account သို့မဟုတ် google adsense account မှ တစ်ဆင့် ငွေလက်ခံရရှိပါမည်။
Google play store သည် application နှင့် ဂိမ်းများသာ ရောင်းသည်မဟုတ်ပါ။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနှင့် ရုပ်မြင်
သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲ ထောင်ပေါင်းများစွာအား ငှားရမ်းကြည့်ရှုခြင်း (သို့မဟုတ်) အပြီးအပိုင်ဝယ်ယူခြင်း ဝန်
ဆောင်မှုကိုလည်း ပေးပါသည်။ ထိုရုပ်ရှင်နှင့် ဇာတ်လမ်းတွဲများအား ကြည့်ရှုရန် Google play movie appli
တေးသီချင်း ရောင်းချရေး ဝန်ဆောင်မှု မှာမူ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ လတွင် music store အမည်ဖြင့် စတင်ခဲ့
သည်။ Music store သည် Google+ ၏ အစိတ် အပိုင်း တစ်ရပ်လည်း ဖြစ်သည်။ တေးသီချင်း တစ်ပုဒ်ကို
ရောင်းချရာ၌ ၁.၂၉ ဒေါ်လာ၊ ၀.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ၀.၆၉ ဒေါ်လာနှင့် အခမဲ့ဟူ၍ အတန်းအစား လေးမျိုး ခွဲခြားထား
ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် Music store ၌ Universal Music Group, EMI နှင့် Sony Music Entertainment
တို့မှ အဓိက ပါဝင်ရောင်းချလျက် ရှိပါသည်။
Google play store ၏ အထင်ကရ မဟုတ်သော လုပ်ငန်းတွင် စာအုပ်ရောင်းချခြင်း ပါဝင်ပါသည်။ Google
play store တွင် အခမဲ့ စာအုပ်ပေါင်း ၃ သန်းခန့်ရှိပြီး အခပေး ရောင်းချသည့် စာအုပ်ပေါင်း ထောင်ချီ၍ရှိပါ
သည်။ Google play website ထဲဝင်၍ စာအုပ်ဖတ်နိုင်သလို Android application သုံး၍ offline လည်း
Facebook Status အတုများ ပြုလုပ်နည်း လေးနည်း
Facebook မှ သင့် သူငယ်ချင်း များကို စနောက် ချင်ရင်တော့ Status အတုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Celebrity များ၊
နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များက သင့်ရဲ့ စတေးတပ်ကို Like , Comment ပြုလုပ်ထားတဲ့ Fake Status များကို သင့်သူငယ်
ချင်းများ မြင်တွေ့ရရင် အံ့သြ သဘောကျမှာ သေချာပါတယ်။ ဒီလို ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Tools များစွာ အင်တာနက်မှာ ရှိနေ
ပါတယ်။ Status သာမကဘဲ News Feeds နဲ့ Chat အတုများ ကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။
The Wall Machine က Fake Status များပြုလုပ်ဖို့ အလွန်ကောင်းတဲ့ Web App တစ်ခုပါ။ အဲဒီ Tool ကို အသုံးပြုဖို့
သူ့ရဲ့ ၀က်ဆိုက်ကိုသွားပြီး သင့်ရဲ့ Facebook အကောင့် နဲ့ Log In ၀င်ရမှာပါ။
ပြီးရင်တော့ Fake Status , Comments များကို လွယ်ကူစွာ ဖန်တီးနိုင်ပါပြီ။ Relationship Update, Friendship
Update, Photo, Events များကို ပြုလုပ်ဖို့ ခလုတ်များကို ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ The Wall Machine က နမူနာ
စတေးတပ် အတုများကို ပြသပေးထားပါတယ်။ နမူနာ စတေးတပ်ကို သင့်စိတ်တိုင်းကျ ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။ ပြုလုပ်
ထားတဲ့ Fake Status ကို ဓါတ်ပုံအနေနဲ့ သိမ်းဆည်းပြီး Facebook မှာ မျှဝေနိုင်ပါတယ်။
▼ The Wall Machine ▼
Status Clone ကတော့ The Wall Machine လို သင့်ရဲ့ Facebook ID ကို အသုံးပြုစရာမလိုတဲ့အတွက် အလုပ်ရှုပ်
သက်သာပါတယ်။ Classic သို့မဟုတ် Timeline Format နှစ်မျိုး ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ Classic Mode ကို အသုံးပြု
ရင်တော့ နှစ်များစွာ အကြာက Facebook ဒီဇိုင်းကို တွေ့ရမှာပါ။ စတေးတပ် အတု ပြုလုပ်ပြီးရင်တော့ ဓါတ်ပုံ အနေ
▼Status Clone ▼
Simitator က အပေါ်က နှစ်ခုလိုပဲ စတေးတပ် အတုများဖန်တီးပေးနိုင်သလို Facebook Chat Log အတုများကို
ပါ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သင်နဲ့ Celebrity တစ်ယောက် စကားပြောနေတဲ့ Chat Log အတုများ
ဖန်တီးပြီး သူငယ်ချင်းများကို လှည့်စားနိုင်တဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်စရာများ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Simitator ကို အသုံးပြုရတာ အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ သင်ဖန်တီးနေတဲ့ စတေးတပ် အတုကို ဘေးဘက်မှာ Live
Preview အနေနဲ့ ပြသပေးမှာပါ။ ပြုလုပ်ပြီးတဲ့ စတေးတပ် အတုကို JPEG ဖိုင်အနေနဲ့ သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။
Simitator က Twitter, Snapchat, Yahoo Answers , iOS Texts အပါအ၀င် အခြား လူမှု ကွန်ရက်များနဲ့ Messen
ger များအတွက်ပါ Fake Status နဲ့ Chat Log အတုများ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
▼ Simitator ▼
Facebook Status အစစ်များကနေပဲ သူငယ်ချင်းများကို ကြွားချင်ရင်တော့ FbStatusVia ကို သုံးပါ။
FbStatusVia ၀က်ဆိုက်မှာ iPhone နဲ့ တန်ဖိုးကြီး Android Phone များစွာကို ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ သင်ဟာ
တန်ဖိုးကြီး စမတ်ဖုန်းကနေ ပို့စ်တင်နေတယ်လို့ သူငယ်ချင်းများကို လှည့်စားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ စတေးတပ်
မှာ သင့်ရဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားကို ပြသပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ Gadget များအပြင် via Telepathy, via NASA
Satellite စတဲ့ ရီစရာကောင်းတဲ့ စာသားများကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
▼ FbStatusVia ▼
Facebook မှာ လူကြိုက်အများဆုံး ပို့စ်များဟာ ဟာသပို့စ်များ၊ ဟာသ ကာတွန်းများ ဖြစ်တယ်လို့ စစ်တမ်း များ
က ဖော်ပြနေပါတယ်။ သင်ဟာ Facebook မှာ နာမည်ကျော်ကြားလူသိများသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ရင် ရံဖန်ရံ
ခါ ဆိုသလို သူငယ်ချင်းများကို ပျော်ရွှင်စေဖို့ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလို ပြုလုပ်ချင်ရင်တော့ အပေါ် မှာ ဖော်
ပြထားတဲ့ Tools များက အသုံးဝင်ပါတယ်။
ကဏ္ဍ Facebook, လမ်းညွှန်, အင်တာနက်ဆောင်းပါး
ကဲ ဖေ့ဘုတ် အရမ်းသုံးနေတဲ့ ကိုကို မမတို့ ဒါလေးကို ဖတ်ကြည့် လိုက်ပါ
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် အနည်းနဲ့ ယှဉ်ရင် အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဆိုရှယ် မီဒီယာတွေဟာ ကျွန်ုပ်တိုရဲ့့နေ့ စဉ်ဘဝတွေမှာ မရှိ
မဖြစ် လိုအပ်ချက် တစ်ခုလို ဖြစ်လာ ပါတယ်။ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်က တဆင့် ဆေးစွဲ သလို စွဲလန်းတဲ့ အဆင့်
အထိ ရောက်သွား ခဲ့ရင်တော့ အကျိုး ဆုတ်ယုတ် မှုတွေ အများကြီး ဖြစ်စေနိုင်လို့ဆိုရှယ် မီဒီယာ တွေကို လို
အပ်တာထက် အသုံး မချ မိဖို့ လိုပါတယ်။
၁) အကြောင်း အရင်း နားလည်အောင် ကြိုးစားပါ။
ဆိုရှယ်လ် နက်ဝေါ့ခ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ တွီတာတို့ မှာ ၄၊ ၅ နာရီလောက် ကြာအောင် Refresh ခဏခဏ
လုပ်ပြီး အချိန်ပြည့် အသုံးပြုနေပါသလား။ ဒီလိုအကျိုးမရှိတဲ့ လုပ်ရပ်တွေတွက် အချိန်ကုန်နေရတဲ့ အကြောင်း
အရင်းကို သင်သိပါ သလား။ ဘဝ တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း အတွက် ဆိုရှယ် မီဒီယာကို အသုံးပြုနေတာ
မဟုတ်ဘဲ အကြောင်းမရှိ ဆိုရှယ်လ်နက်ဝေါ့ခ်ကိုအမြဲမပြတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေရင်တော့ သင့်ရဲ့ မသိစိတ်က
ပထမဦးဆုံးသင်ဘာကြောင့် ဆိုရှယ်လ်နက်ဝေါ့ခ်ကို အသုံးပြုနေသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်
အောင် ကြိုးစားပါ။ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုက သင့်စိတ်ထဲမှာ ထင်ကျန်တတ်စေပါသလား။ ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းက
တော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာ စွဲလန်းမှုတွေရဲ့ လက္ခဏာတွေ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ် မှုများကိုပြောင်း လဲ
စေနိုင်ရုံသာ မကပဲ နေ့စဉ် ဘ၀ကိုပါ ထိခိုက် လာစေနိုင် ပါတယ်။
အင်တာနက် အသုံးပြုချိန်ကို သတ်မှတ်ထား သင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အလုပ်အချိန်နဲ့ မိသားစု အတွက်အချိန်
တွေမှာ ဆိုရှယ်လ် မီဒီယာကို အသုံးများလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒီလို အလုပ်အချိန်တွေ၊ မိသားစု ဝင်တွေနဲ့ တွေ့ ဆုံ
နေ ချိန်မှာဆိုရှယ်လ် နက်ဝေါ့ခ် အသုံးပြုနေခြင်းကို အချိန် အကန့် အသတ်နဲ့ ထားရှိပေး သင့်ပါတယ်။
ဆိုရှယ်လ် မီဒီယာအပေါ် အာရုံလွှဲချင်ရင် ၀ါသနာပါတဲ့ အားကစား တစ်ခုလုပ်ပြီး အာရုံလွှဲနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
စာဖတ်တာ ဝါသနာ ပါရင်တော့ စာအုပ်နဲ့စာဖတ်ပါ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ စာဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဆိုရှယ်လ်နက်ဝေါ့
အားလုံးကို ပိတ်ထားပြီး ဖတ်သင့်ပါတယ်။ ဒီလို ဆိုရှယ်လ်နက်ဝေါခ် နေရာမှာ ဝါသနာပါတာ တစ်ခု ခုကို အစား ထိုးလိုက်တာကနေ့ စဉ်ဘဝတိုးတက်ရေးအတွက် အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
၄) ဆိုရှယ်လ် မီဒီယာကို ဦးစားမပေးပါနဲ့ ။
ဆိုရှယ်လ် မီဒီယာကို ဘယ်တော့မှ ဦးစား မပေး သင့်ပါဘူး။ သင်ရဲ့ အလုပ်၊ မိသားစု နှင့် ကျန်းမာရေး တွေ ကို
ဥပေက္ခာပြုပြီး ဆိုရှယ်လ် မီဒီယာကို ဦးစားပေးရင် အကျိုး ဆုတ်ယုတ် မှုတွေပဲဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့်မလို့ ဆို
ရှယ်လ်မီဒီယာတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဆိုရှယ်လ်မီဒီယာတွေကို အားလပ်ချိန်တွေမှာသာ
ဖျော်ဖြေရေးတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
Facebook မစွဲလန်းတော့လျှင် ရရှိလာမည့် ကောင်းကျိုး (၁၀) ခု
Social Network တွေ ဖြစ်တဲ့ Facebookတို့ Twitter တို့ဆိုတာ လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာ၊ မိတ်ဆွေ အသစ်တွေ
ရှာဖွေရာမှာ အသုံး ၀င်ကောင်း ၀င်ပါ လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းတော့ အဲ့လို အကျိုး ရှိရှိ အသုံးချ မနေကြပါဘူး။
လူတော်တော် များများ အတွက် Facebook ကို Check တာဟာ အလုပ် တစ်ခုလိုတောင် ဖြစ်လာနေပါပြီ။ တစ်
ချို့သော လူတွေက Likes ရဖို့အတွက် Post တွေတင်ကြတယ်။ အခြားသူတွေ ဘာလုပ်နေမလဲ Facebookပေါ်
မှာကြည့်မယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ဘာဖြစ်နေလဲ ကြည့်မယ်။ ဂိမ်းဆော့မယ်။
အစ ရှိသဖြင့် Facebook ကို အသုံး ပြု နေ ကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ကလည်း အင်တာနက် ဆိုတာကို Gtalk,
Facebook, Viber နဲ့ စသိပြီး သုံးကြတာ များ ပါတယ်။ ဒီတော့ အချိန်တွေ ဖြုန်းနေ လို့ ဖြုန်းမှန်း မသိ အောင်ကို
Facebook သုံးကြ ပါတယ်။ သင်ရော အဲ့ဒိ အထဲ ပါနေပြီလား ?
ဒါဆိုရင်တော့ သင်ရပ်တန်းက ရပ်သင့်ပါပြီ။ သင် Facebook ကို ခနခန သုံးမနေဘူး ဆိုရင် ဖြစ် လာနိုင်မယ့် အ
ချက် (၁၀) ချက်ကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
(၁) သင့်ဘ၀ပြန်လည် အသက်ဝင် လာလိမ့်မယ်။
"ပြန်လည် အသက်ဝင်လာမယ်” ဆိုတဲ့ စကားကို သုံးရတာ အကြောင်း ရှိပါတယ်။ သင်Facebook ကိုကြည့်တဲ့
အကြိမ်ရေကို ပြန်တွက် ဖူးပါသလား ?
တစ်နေ့မှာ၂၄ နာရီ ရှိပါတယ်။ ၈ နာရီက အိပ်ပါတယ်။ ၈ နာရီက အလုပ် လုပ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၈ နာရီ မှာရော
ဘယ်နှကြိမ်လောက် Facebook ကို ကြည့်ပါသလဲ ? တနေကုန် အလုပ်မှာလည်း Facebook ကြည့်တယ်၊ ကျန်
တဲ့ ၈ နာရီမှာလည်း Facebook ကြည့်တယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ နေ့စဉ် ဘ၀က ရှင်သန်သေး ရဲ့လား ပြန်စဉ်းစားဖို့ လို
ပါပြီ။ Facebook မပေါ်ခင်တုန်း ကရော သင်ဘာလုပ်ခဲ့လဲ ပြန်စဉ်းစားပါ။
သူငယ်ချင်း သို့မဟုတ် မိသားစုနဲ့ မုန့်သွားစားမယ်၊ သို့မဟုတ် တစ်ယောက်ထဲ ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်၊ သို့မဟုတ် စာ
ဖတ်မယ်၊ ဒါမှ မဟုတ် သင်ဝါသနာ ပါတာ တစ်ခုခု လုပ်မယ်။ တစ်ခုခုတော့ သင်လုပ် ခဲ့မှာပါ။
တစ်ချို့က Facebook ကို အလကား သုံးတာ မဟုတ်ဘူး၊ Facebook ပေါ်မှာ စာဖတ်တယ် လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်
ပါတယ် Facebook ပေါ်မှာ အဲ့လိုအကျိုးရှိတာတွေ လုပ်တာကိုတော့ အားပေးပါတယ် ဒါပေမဲ့ သင်တကယ်ရော
More….ဆိုတဲ့ နေရာကိုနှိပ်လိုက်လို့ စာကြီးက ရှည်နေရင် သင်ဖတ်ဖြစ်လို့လား? သတင်း တိုတိုလေးတွေပဲသင်
သင် Facebook ကို ခဏခဏ စိတ်ရောက်နေချိန်မှာ သင် အစာကျွေးမှာကို စောင့်နေတဲ့ သင့်ရဲ့ခွေးလေးလဲရှိချင်
ရှိမယ်။ ဒါမှမဟုတ် သင်နဲ့ အတူတူ တစ်နေရာရာ သွားချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းလည်း ရှိချင်ရှိမယ်။ သင့်ရဲ့ Social ပိုင်း
ကောင်းလာတယ်လို့ သင်ထင်ကောင်း ထင်နိုင်ပေမယ့် တကယ်တမ်းက သင်အတုအယောင်လောက တစ်ခုမှာ
ပျော်နေတာပါ။ English စာလုံးလေးလုံးနဲ့ ပေါင်းထားတဲ့ Like ဆိုတဲ့ စာလုံးမှာ သင်ပျော်ဝင်နေတာပါ။ သင့်ဘေး
က သင့်အပေါ်မေတ္တာ ရှိတဲ့ အရာအားလုံး သင့်အတွက် တကယ်အကျိုးရှိတဲ့ အရာအားလုံးကိုသင်မေ့နေတာပါ။
သင်တစ်နေရာရာကို သွားရင်တောင် သင့်ဖုန်းလေးကို တကြည့်ကြည့်နဲ့ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ Facebook ခဏခ
ဏသုံးနေတာကို ရပ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို တစ်ခါလောက် စေ့စေ့စပ်စပ်လေး ကြည့်လိုက်ပါ။ သင် အများကြီး တိုး
တက် လာလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းအရင်းတွေ အတွက်၊ သင့်ရဲ့မိသားစု အတွက် Like ထက်ပိုပြီး အဓိပ္ပါယ်
ရှိတဲ့ အရာတွေကို လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
(၂) အလုပ်တွေ ပိုပြီးလာလိမ့်မယ်။
ဘလော့ဂါ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အတွေ့အကြုံကို ပြောပြပါ့မယ် ကျွန်တော်က အင်တာနက်ကို အ
ချိန်ပြည့် သုံးရပါတယ်။ စာတွေကို အင်တာနက် ကနေ ရှာဖွေပြီး ဖတ်ရှုရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အကြီးမားဆုံးရန်
သူကတော့ Social Media ပါပဲ စာဖတ်လိုက် Facebook ကိုကြည့်လိုက်နဲ့ အလုပ်ပေါ်အာရုံ စူးစိုက်မှု အားနည်း
လာပါတယ်။ Facebook ကို ခဏလေး ဆိုပြီး ကြည့်ရာ ကနေ ၁၅ မိနစ်လောက် ကြည့်ဖြစ်တဲ့ အခါ ကြည့် ဖြစ်
သွား ပါတယ်။ အဲဒိ အခါမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ Productivity က သိသိ သာသာ ကျသွား ပါတယ်။ စာဖတ်နေ ရင်းနဲ့
Facebook ကို ကြည့်ချင် စိတ်တွေ ပေါ်လာပါတယ်။ အလုပ်မပြီးတဲ့ အတွက် stress များလာပါတယ်။ အရာရာ
ဒါပေမဲ့ အချိန်မှီပဲ ကျွန်တော်ဖြေရှင်းနိုင် ခဲ့ပါတယ်။ နေ့တစ်နေ့ရဲ့ ဘယ်အချိန်မှာ Facebook ကိုဖွင့်မယ် ဆိုတာကို
အချိန်ဇယား လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒိနောက်ပိုင်း အလုပ်တွေ ပိုပြီးလာ ပါတယ်။ Stress တွေလည်း နည်းလာပါ
တယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ် ချိန်မှာ Facebook သုံးတာကို ဖြစ်နိုင်ရင် ရှောင်ရှားပါ။ မရှောင်ရှားနိုင်ရင် အချိန် တစ်ခု
သတ်မှတ်ပြီး သုံးပါ။ သင့် အလုပ်တွေ ပိုပြီး လာပါလိမ့်မယ်။
(၃) အခြားအရာတွေမှာ အာရုံစူးစိုက်မှု ပိုကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
Facebook ကတက်လာမယ့် Update Status တွေကို မအိပ်ဘဲ ရူးရူးမိုက်မိုက် စောင့်ဖူးပါသလား? အဲဒိ အချိန်
တွေကို အခြားမှာ သုံးဖို့ရော စဉ်းစားဖူးပါသလား?
အဲ့ဒိ New Status တွေ တက်တာကို စောင့်နေတဲ့ မိနစ် ၃၀ လောက်ကို စာအုပ်ဖတ်ဖို့ ဖြစ်ဖြစ် စဉ်းစားဖူးပါသ
လား? စာအုပ်ဖတ်တာ ဖြစ်ဖြစ်၊ မနက်ပိုင်းမှာ ဆိုလည်း ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုလုပ်
ကြည့်ပါ။ အခြားအရာတွေပေါ်မှာ သင့်ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှု ပိုမို ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
(၄) သင့်သူငယ်ချင်း အစစ်တွေက ဘယ်သူတွေလဲ ဆိုတာ သင်သိလာ ပါလိမ့်မယ်။
Facebook ပေါ်မှာ ခင်ရတာ အရမ်း လွယ်ကူပါတယ်။ လူတွေရဲ့ posts တွေကို like ပေး comment ပေးတယ်
ဆိုတာ ပြောပလောက်အောင် အချိန် မကုန်ပါဘူး။ သင် Facebook မသုံးဘဲ နေကြည့်လိုက်ပါ။ သင့်ကိုဘယ်
နှစ်ယောက် လောက် ဖုန်းဆက်မလဲ၊ သင်နဲ့ အပြင်မှာ ဘယ်သူက တွေ့ပြီး မုန့် အတူတူ စားမလဲ စောင့်ကြည့်
လိုက်ပါ။ သင့်သူငယ်ချင်း အစစ်တွေ ပေါ်လာပါလိ့မ်မယ်။
(၅) သင်စွဲလမ်း ခဲ့ဖူးတဲ့ Like ဆိုတာ ဘာမှ တကယ့်ဘ၀မှာ သုံးမရဘူး ဆိုတာ သင်သိလာလိမ့်မယ်။
Facebook ပေါ်မှာ Like တယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ Like ရဲ့ Meaning တောင်ပျောက်နေပါပြီ။ ဓာတ်ပုံ မမြင်
ရပဲနဲ့လည်း Like ချင် Like မယ်။ Like ပြန်ရချင်လို့ Like တာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ တာဝန်ဝတ္တရား အရလုပ်
ပေးတဲ့အရာ တစ်ခုတောင် ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ လူတော်တော်များများက အဲ့ဒါကို မမြင်နိုင် ကြဘူး ဖြစ်နေကြ
ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Facebook နဲ့ နည်းနည်းခွဲနေ ကြည့် လိုက်ပါ။ Facebook ပေါ် က Like ဆိုတာ ဘာမှ မ
ဟုတ်ဘူးဆိုတာ သင်သိ လာပါလိမ့်မယ်။
(၆) လက်တွေ့ ဘ၀မှာ ပိုပြီးအောင်မြင် လာလိမ့်မယ်။
Facebook ကပေးတဲ့ အဓိက ပြသနာ ကတော့ ဘယ်တော့မှ Facebook ပေါ်မှာ လုပ်စရာတွေ မကုန်သွား
တာပါပဲ။ ကြည့်စရာ အသစ်တွေ၊ Like စရာ အသစ်တွေ သူငယ်ချင်း အသစ်တွေ၊ comment ပေးစရာတွေ၊
Share စရာတွေနဲ့ သံသရာ လည်နေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အပြင်လက်တွေ့ ဘ၀မှာတော့ သင်ပြီးမြောက် အောင်
လုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ စာအုပ် တစ်အုပ်ကို ပြီးအောင် ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ဥယျာဉ်လေး
တစ်ခုပြီးမြောက် အောင် အပင်စိုက်နိုင်ပါတယ်။ ပန်းကန်တွေ ကူဆေးပေး နိုင်ပါတယ်။ Facebookကနေ ခ
ဏထွက်ပြီး အပြင်ဘ၀မှာ တစ်ခုခုပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။
(၇) Facebook မလိုလားအပ်တဲ့ ပြသနာတွေ အေးသွား ပါလိမ့်မယ်။
Facebook သုံးတဲ့ သူတိုင်းအတွက် သင့်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ သူရှိနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သင်က မိန်းက
လေးဖြစ် ရင်ပေါ့။ သင့်ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ၊ သင်ရဲ့ စိတ် ထဲက လျှို့ဝှက်ချက်တွေ အားလုံးကို အလွယ် တကူသိနိုင်
ပါတယ်။ သင်က Privacy Setting ကိုမြှင့်ထားပေမယ့် Privacy Settting မမြှင့် ထားတဲ့ သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း
တစ်ယောက်က သင့်ကို ”မနက်ဖြန် Junction Sqare သွားကြမယ်လို့” tag ထားတယ် ဆိုပါစို့။
သင့်ကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ သူက သင်နဲ့ Friend ဖြစ်မနေဘူး ဆိုရင်တောင် သင့် သူငယ်ချင်းက တစ်ဆင့်သိ
နိုင် ပါတယ်။ ဒီတော့ သင့်ကို နှောက်ယှက်ချင်တဲ့ သူက သင်မနက်ဖြန် ဘယ် သွားမလဲ သိသွားပြီပေါ့။ ဒါပေ
မဲ့ သင်Facebook နဲ့ ခပ်ခွာခွာနေ ရင်တော့ အဲ့ဒိလို ပြသနာတွေ ကြုံတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
(၈) သင့်ကိုယ်သင် ပိုပြီး အကောင်းမြင် လာလိမ့်မယ်။
လေ့လာ တွေ့ရှိချက်တွေ အရတော့ Facebook က လူတော်တော် များများကို စိတ်ဒုက္ခ ပေးလေ့ ရှိပါတယ်တဲ့။
သင် post တစ်ခုတင်လို့ Like နည်းတဲ့ အခါ၊ သင့်ပုံတင်လိုက်လို့ Like နည်းတဲ့အခါ၊ သင့်ကိုယ် သင်ယုံကြည်
မှုတွေပါ ကျဆင်းလာ တတ်ပါတယ်။ သင့်ကို စိတ်ဓာတ်ကျလာစေပါတယ်။ ခနလောက် Facebook နဲ့ ဝေးဝေး
နေ ကြည့်လိုက်ပါ။ သင့်ကိုယ်သင် ပိုပြီး အကောင်းမြင်လာ ပါလိမ့်မယ်။
(၉) သင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုမို အကောင်းမြင်လာလိမ့်မယ်။
ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်တမ်း တစ်ခုအရတော့ Facebook အသုံးပြု သူတော်တော်များမျာဟာ ၀န်တိုစိတ်
တွ များလာ ကြပါ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Facebook ပေါ်မှာ သူ များတွေ တင် ထားတဲ့ အရာ တွေ ကိုကြည့်ပြီး
မနာလို ဖြစ်လာကြပါတယ် လို့ဆိုပါတယ်။
သူများတွေ တင်ထားတဲ့ ဖုန်း အသစ်ပုံ၊ ကား အသစ်ပုံ၊ အိမ် အသစ်ပုံတွေ၊ ချစ်သူတွေ တွဲရိုက် ထားတဲ့ ပုံတွေ၊
မိသားစု တွေ ပျော်ရွှင် တဲ့ ပုံတွေ ကိုကြည့်ပြီး တစ်ချို့က မနာလို ဖြစ်တတ် ကြ ပါတယ်။ Facebook ဆိုတာအ
ရမ်းကြွားလို့ ကောင်းတဲ့ အရာဖြစ် တာကြောင့် လူတွေ ကတော့ ကြွားနေမှာပါပဲ။ ဒီတော့ သင်အဲဒိလို မနာလို
မှုတွေ ရှိတယ် ဆိုရင် Facebook ကနေ ခနလောက် ထွက်ပြီး သင့်မှာ ရှိတဲ့ အရာ တွေကို တန်ဖိုးထား ကြည့်
(၁၀) Facebook ဆို တာကြော်ငြာတွေ အများကြီး မြင်နိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုထက် မပိုဘူးဆိုတာ သင်နား
Facebookက သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေကို မှတ်သားထားပြီး သင်ကြိုက်လောက်မယ့် အရာတွေကိုသင်
မြင်ရအောင် ခဏခဏဖော်ပြ ပေးနေတာပါ။Facebook ကတကယ်တော့ သင့်ကို Data အဖြစ်အသုံးချပြီး စီး
ပွားရေးလုပ်နေတာပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ လိုအပ် တာထက်ပိုပြီး Facebook ကိုမသုံးစွဲပါနဲ့။
ကျွန်တော်က Facebook ကို ပြစ်တင် ရှုတ်ချနေတာ မဟုတ် ပါဘူး။ Social Media ဆိုတာ တစ်ချိန်က အရမ်း
ကောင်းတဲ့ ရည်ရွယ်တစ်ခုနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့အခုတော့ သင်ရော၊ ကျွန်တော်ရော Social Media
တွေ ကိုယ်တိုင်ရော မူရင်း ရည်ရွက်ချက်ဖြစ်တဲ့ မ်ိတ်ဆွေကောင်း အသစ်တွေ ရရှိဖို့ ဆိုတာကို မေ့နေကြပါပြီ။
Facebookဆိုတာ အလုပ်တစ်ခု၊ စီးပွားရေးတစ်ခု စွဲလမ်းမှုတစ်ခု ဖြစ်လာပါပြီ။
Facebook ကနေ ကောင်းတဲ့ အချက်တွေ အများကြီး ရပါတယ်လို့ သင်ထင် ရင်တော့ ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုးကို စိတ်အေးအေးလေးထားပြီး နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ပါအုံး။ Facebookကို ထာဝရမသုံးဖို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။
အကျိုးရှိအောင်ပဲ သုံးပြီး သင့်ရဲ့ အချိန်အများစုကို အရေးမကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ မဖြုန်းဖို့ ပြောချင်တာပါ။